Maraykanka, Britain iyo Faransiiska oo weerar gantaalo ah ku qaadey Siiriya • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Maraykanka, Britain iyo Faransiiska oo weerar gantaalo ah ku qaadey Siiriya
Maraykanka, Britain iyo Faransiiska oo weerar gantaalo ah ku qaadey Siiriya
April 14, 2018 - By: Abdirizak Shiino
Maraykanka, oo ay la jiraan Britain iyo Faransiiska, ayaa weerar ku qaaday saldhigyo dhowr ah oo ku yaala dalka Siiriya. Waxay ku dhawaaqeen saddexda hoggaamiye ee Donald Trump, Theresa May iyo Emmanuel Macron, habeenkii sabtida, tallaabada ay ka qaadayaan Xukuumadda Siiriya, wax yar kadib fariimahooda, waxaa la maqley qaraxyada ka dhacay caasimadda Dimishiq iyo Xoms. Ugu yaraan saddex qof ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen, sida uu sheegay Telefishanka Siiriya.
Weerarka Suuriya waxaa sababay natiijo ku saabsan weerarka hubka Kiimikada ah ee Xukuumadda Siiriya lagu eedeeyey in ay ka danbeyso.
“Muddo yar ka hor, waxaan amar ku siiyay ciidamada Maraykanka in ay weeraro ku qaadaan bartilmaameedyada la xidhiidha kali taliyiha Bashar al-Assad ee dhismaha hubka kiimikada,” ayuu yiri madaxweynaha Mareykanka Donald Trump khudbad si toos ah telefishanada looga sii daayey.
Waxay ahayd saacaddu 03:00 habeenkii Sabtida, iyadoo Trump ku dhawaaqay in hawlgalku bilaabmayo. Markiiba waxaa caasimadda Dimishiq iyo Xumus laga maqley qaraxyada sida ay ku soo waramayso wakaaladda wararka ee Reuters.
Ugu yaraan 100 gantaal ayey ku rideen Xulafadu muddo 45 daqiiqo ah, sida ay sheegeen xogo laga helaayo Ruushka, Siiriya iyo weliba Ingriiska.
Telefisnhanka Siiriya ayaa sheegahyy in Gantaalada intooda badan hawada lagu qarxiyey oo aysan geysan wax khasaaro ah.
Wasaaradda Gaashaandhigga ee Ruushka ayaa sheegtey in badan oo kamid ah gantaalada in difaaca dalka Siiriya ay ka hortageen oo hawada lagu qarxiyey.
Wasiirka Gaashaandhigga Maraykanka James Mattis ayaa sheegay in hawlgalka la soo gebagebeeyey, kaas oo qaatey 45 daqiiqo oo keliya, laakiin markii ay doonaan ay dib u bilaabi karaan.
Safiirka dalka Ruushka u fadhiya Maraykanka ayaa sheegay in weerarkaan uu ihaano ku yahay Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo sheegay in an loo baahneyn weerarkan natiijo xuna ay ka dhalan karto, waxa la sugaana ay tahay natiijo aan la fileyn in ay timaado, ayuu yiri.
Muuqaal la soo dhigay Barta Twitterka ayaa lagu muujiyey Madaxweynaha Suuriya Bashar Assad oo xafiiskiisa shaqada soo gelaya subaxnimada maanta ee Sabtida inkasta oo aan laxaqiijin karin xiliga muuqaalka la duubay.
Horay ayaa loo saadaaliyey in jawaabta reer Galbeedku ay noqon doonto gantaalo laga soo rido maraakiibta u fadhida Badda Cas iyo gacanka Qubrus, waxaase si weyn la isu weydiinayaa in weerarku qaatey 45 daqiiqo oo keliya, iyada oo Siiriya iyo Ruushku ay sheegayaan in gantaalada ay ka hortageen ciidanka difaaca cirka ee Siiriya.